Makumbo Angu Achakura Here Kubva Kubhasikoro - BikeHike
Kuchovha bhasikoro kunoita kuti makumbo ako ave matete here?
Ndinomisa sei makumbo angu kuti asakure kana ndichichovha bhasikoro?
Sei makumbo angu ari kukura kubva pakuchovha bhasikoro?
Vatyairi vemabhasikoro vanowana sei makumbo matete?
Kuchovha bhasikoro kunokupa dambudziko guru here?
Kuchovha bhasikoro kunoita kuti uve mutete?
Bhasikoro inoderedza dumbu here?
Kuchovha bhasikoro zuva nezuva kwakawandisa here?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti uwane kuchovha bhasikoro?
Kuchovha bhasikoro kwakanakira zvidya here?
Kuchovha bhasikoro kungatsiva zuva regumbo here?
Kuchovha bhasikoro kwakanakira chimiro chemuviri here?
Sei vatyairi vemabhasikoro vari vatete kudaro?
Kuchovha bhasikoro kuchaita makumbo angu here?
Kumhanya kana kuchovha bhasikoro zviri nani kune toning makumbo?
Kuchovha bhasikoro kuchachinja sei muviri wangu?
Kurema kwakadii kwaunogona kurasikirwa nako kuchovha bhasikoro maminetsi makumi matatu pazuva?
Kuchovha bhasikoro rako kunopa kusingaite aerobic kurovedza muviri uye kunobatsira mukupisa mafuta emuviri. Kuchovha bhasikoro nguva dzose kunogona kuita kuti makumbo ako ave matete. Kune chero munhu ane tsika yekuwedzera kubva mukurovedza muviri, kudzikisira kuramba uye kuterera kune yako maitiro kunobatsira iwe kuwana uremu pasina kuwedzera tsandanyama.
Nzira Yokuchovha Bhasikoro Kuti Uremekedze Uremu uye Usagadzira Makumbo Makuru Vavarira kukwira kwenguva refu, pane kukwira kwakaoma, kuwedzera macalorie ako kupisa uye kuvaka kutsungirira. Shandisa nguva yekudzidzira kuwedzera macalorie kupisa. Sarudza nzvimbo dzakati sandara pane zvikomo panguva yako yekurovedza muviri.
Zvisinei, kana tsandanyama dziri mumakumbo ako dzichisimba, dzinowanzowedzera kukura. “Dai waizochovha uchimhanya kwenguva yakareba, pane mukana wekuti unogona kuwana tsandanyama yakawanda,'” anodaro Keoni Hudoba, mugadziri weCyc Method, uye murairidzi wemabhasikoro kuNYC's Cyc Fitness.
Iyo yekumhanyisa bhasikoro nhanho inoitwa pane yakaderera-resistance level. Kurovedzera bhasikoro kwekunze kunoitwa mugiya rakaderera munzira yakati sandara kuti uwane makumbo matete anochovha bhasikoro. Misiyano ine chikomo Workout ndeyekuti muviri wako unobata makumbo kakawanda izvo zvinotungamira kune muscle toning.
Kuchovha bhasikoro hakukupe yakakura butt, asi inogona kukupa yakawedzera shapely imwe nekuda kweiyo cardio uye mhasuru-yekuvaka mabhenefiti. Kuchovha bhasikoro kunoshanda makumbo ako uye glutes, kunyanya kana iwe uchikwira, asi haigare kwenguva yakakwana kana kupa kupikisa kwakakwana kuvaka mamhasuru makuru.
Kuchovha bhasikoro chinhu chakanakisa cardio Workout. Inogona kubatsira kusimbisa hutano hwemwoyo nemapapu, kuvandudza kuyerera kweropa rako, kuvaka simba remhasuru, uye kuderedza kushushikana kwako. Pamusoro peizvozvo, zvinogona zvakare kukubatsira kupisa mafuta, tochi macalorie, uye kuderedza uremu.
Kuchovha bhasikoro mazuva ese kwakanaka kana kuchiitwa zvine mwero wakasimba uye kana muviri wako uine nguva yakakwana yekupora. Vanokwikwidza mabhasikoro vanoda mazuva ekudzoreredza vachipihwa kusimba kwekudzidziswa kwavo uye mijaho, nepo vatasvi vebhasikoro vakajairwa vanogona kuchovha pasina kutora mazuva.
Mushure mekuzorora kwenguva refu, ndinoona kuti zvinotora pakati pemazuva manomwe kusvika gumi kuti nditange kunzwa zvakanaka pabhasikoro zvakare. Mazuva mashoma ekutanga achange ari kunetsa asi mushure mevhiki kana kuti saka unofanirwa kunzwa zvakanaka kuti utange kuwedzera mutoro wekudzidzira, uye ipapo iwe uri munzira yekupora.
Kuchovha bhasikoro kunogona kubatsira toni makumbo, zvidya nemagaro Pamwe chete nekumhanya uye kushambira, kuchovha bhasikoro ndeimwe yeakanakisa aerobic maitiro; inosimbisa uye inovandudza majoini emakumbo nemamhasuru uye inogona kukubatsira kurasikirwa nemafuta pazvidya nemhuru.
Rega zvizivikanwe kuti haugone "kutsiva" zuva regumbo. Hongu, kutasva bhasikoro rekurovedza muviri kana kutora spin kirasi kamwechete kana kaviri pavhiki kunozobatsira nekuvaka tsandanyama mumakumbo.
Kuchovha bhasikoro inzira yakanaka yekudzora kana kuderedza uremu, sezvo ichisimudza mwero wemetabolism, inovaka tsandanyama uye kupisa mafuta emuviri. Kana uri kuedza kuderedza uremu, kuchovha bhasikoro kunofanira kusanganiswa nechirongwa chekudya chine utano. Tsvagiridzo yeBritain inoratidza kuti kuchovha bhasikoro kwehafu yeawa zuva rega rega kuchapisa anenge makirogiramu mashanu emafuta kwegore.
6. Nei maoko evatyairi vemabhasikoro akaonda kudaro? Zvimwe itsikidzi dzinodya nyama mukiti yedu yekudikitira, asi zvakanyanya imhaka yekuti (izvi zvakaoma) mapedhi ari pasi petsoka dzedu uye maoko edu haana chaari kuita kunze kwekungoenda zvishoma nezvishoma.
Semutambo wekutsungirira, kuchovha bhasikoro kunogona kuve kwakanakira kusimba kwemoyo, pamwe nekuita mhasuru, kuvandudza muviri uye kuwedzera chimiro chemuviri. Uye inogona kubatsira kuvandudza mhasuru toni yemakumbo ako, glutes uye musimboti.
Kuchovha bhasikoro kunogona kukubatsira kuvaka tsandanyama muhafu yako yepasi. Kumhanya hakutungamiriri kune kuwanda kwakawanda, asi kunogona kukubatsira kukudziridza mhasuru dzakasimba, dzakasimba. Kusundidzira mapedals uku kuchovha bhasikoro kudzidzira kuramba kunovaka tsandanyama dzemakumbo.
Zviri nyore kupfuudza ndiro yeaizikirimu pane kushanda kunze. Zvakadaro, kunyangwe usina kuita shanduko paurongwa hwako hwekudya hwemazuva ese, kuchovha bhasikoro rekurovedza muviri maminetsi makumi matatu kashanu pasvondo zvingakubatsira kudonhedza pondo imwe kusvika mbiri pamwedzi. Kana iwe ukadya kudya kwakanaka uye kurovedza muviri, unogona kutarisira kurasikirwa zvakanyanya.
Mhinduro Yekukurumidza: Kuchovha Kunogona Kuita Makumbo Ako Akakura
Mubvunzo: Kubhasikoro Kunoita Kuti Makumbo Ako Akure
Mubvunzo: Kubhasikoro Kuchaita Makumbo Angu Akura Here
Mubvunzo: Kubhasikoro Kunobatsira Unterus Muscle
Ko Mabhasikoro Anobatsira Kuvaka Tsandanyama
Ko Cycling Inobatsira Manzwi Makumbo
Mubvunzo:Kuveura Makumbo Kunobatsira Here Kuchovha
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Kubhasikoro Kunobatsira Muviri Wepamusoro
Mubvunzo: Ko Kuchovha Kunorerutsa Makumbo Ako Kana Kukura
Mabhasikoro Anobatsira Sei Muviri Wako
Mubvunzo: Kubhasikoro Kunogona Kubatsira Kuderera Kwemafuta Mumuviri
Mabhasikoro Anogona Sei Kubatsira Muviri Wako